တရားဟောချက် Archives - MYATMINGALAR
လူများ၏အတွေးအခေါ်ပညာရပ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် တစ်ခေတ်နဲ့တစ်ခေတ် ပိုမိုဆန်းသစ် လာပြီး ပြောင်းလဲမှု့တွေရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု့၊ အသိပညာကွယ်ဝမှု့တွေထဲမှာလည်း တစ်သတ်မှတ်တည်းမဟုတ်၊ ပြောင်းလဲမှု့တွေရှိနေပါတယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကကော ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှု့တွေရှိနေပြီလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်၊ သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ လိုနေ ပါပြီ။ တချို့ဆိုရင် ဘုရားသခင်မရှိဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ တချို့ကရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှိနေတာပဲရှိတယ်။ လူကသာပဓါနဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်၊ ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေရှိနေခြင်းက လူတွေရဲ့တိုးတက်လာမှု့လား ! ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု့ရဲ့ပြယုဂ်လား! မိမိတွေးတဲ့အတိုင်း မိမိဘဝကိုပုံဖေါ်ကြတဲ့အခါ ယခုလက်ရှိတွေ့မြင်နေရတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သင်တွေးတောမှု့ရဲ့ အဆင်းသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ်၊ အခြားသူတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရာရာအားလုံး ဘယ်သို့ဦးတည်သွားနေပါသလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ပါအုံး။ လူတိုင်းက ရှေးဦးစွာအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်မလာပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အတွေးအခေါ်နောက်လိုက် များတော့ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။ မိမိသဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အယူူအဆအတွေးအခေါ်ကို…
ထိုအခါ ယေရှုနှင့် ပါသောသူ တယောက်သည် လက်ကိုဆန့်၍ ထားကို ဆွဲထုတ်ပြီးလျင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျန်တယောက်ကို ခုတ်သဖြင့် နားရွက်ပြတ်လေ၏။ ယေရှုကလည်း သင့်ထားကို သူ့နေရာ၌ ပြန်ထားလော့။ ထားကိုကိုင်သောသူ ရှိသမျတို့သည် ထားဖြင့် ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ယခုပင် ငါ့အဘကို ငါ့တောင်းနိုင်သည် ကို၄င်း၊ တောင်းလျင် ကောင်းကင်တမန် တဆယ်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့ စေလှတ် တော်မူမည်ကို၄င်း၊ သင်သည် မထင် သလော။ သို့ဖြစ်လျင် ဤသို့သော အမှုအရာ တို့သည် ဖြစ်ရမည် ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သို့ ပြည့်စုံအ့နည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၁-၅၄၊ ယောဟန် ၁၈း၁၀-၁၁) ဒီကျမ်းပိုဒ်မှာ အခြေအနေတစ်ခုကို တုန့်ပြန်ပုံများတွေ့ရတယ်။…
အကြောင်းမူကား၊ သူတို့က ထိုအလုပ်ကို လက်စမသတ်နိုင်အောင် သူတို့သည် အားလျော့ကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုလျက် ငါတို့ကိုခြိမ်းခြောက်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ထိုစကားကြောင့် ငါသာ၍ အားရှိ၏။ နေဟမိ ၆း၉ လူတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ပန်းတိုင်တစ်ခုစီ ရှိတတ်ကြတယ်။ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း တစ်ခါတလေ ပန်းတိုင်ပျောက်မလိုလို ဖြစ်တတ်ကြပြန်တယ်။ ကြိုးစားသမျ သဲရေကျ ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှု ကြံုရရခြင်းပဲ။ မင်း ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ လုပ်မနေပါနဲ့။ မင်းကြိုးစားနေရင်လည်း အလကားပါပဲ။ စသဖြင့် ဝေဖန်သံတွေ ကြားရတဲ့အခါ ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျ အားပျက်သွားတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြံုခဲ့ရတဲ့…
တစ်နေ့ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားစဉ် ဆောက်လုပ်ဆဲတိုက် တစ်လုံးကို သတိပြုမိပါတယ်။ အဲဒီနေရာရှေ့ မှ ဖြတ်နေကြမို့ သတိထားမိတဲ့သဘောပါ။ ပထမ တော့ မြေကွက်လပ်သာဖြစ်နေပြီး တော်တော်ကြာမှ အုတ်မြစ်ချကာ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တွေးမိတာက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆောက်မှာ လဲ။ အခုမြင်နေ တဲ့ အတိုင်းက တိုင်တွေသံတွေမို့ ပုံစံမပေါ်ဖြစ်နေတာပေါ့။ အိမ်မှာပြော နေကျ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ ““ မပြီးခင်—-မမြင်စေနဲ့”” တဲ့။ အိမ်မှာတစ်ခုခုလုပ်ပြီ ဆိုရင် စပ်စု၊ ေ၀ဖန်၊ စတာတွေကြောင့် ““မပြီးသေးဘူး၊ မပြောနဲ့ အုံး၊ စောပါသေး တယ်”” ဆိုတဲ့သဘော ပြန်ခုခံတဲ့သဘောနဲ့ ဒီစကားလုံးကိုသုံးတာပါ။ လူတွေဟာ စပ်စုလိုတဲ့သဘော ရှိပြီး မပြီးခင်ကပင် ကောက်ချက်ချအပြစ်တင် လိုတဲ့…